“मा’न्छेको व’ली च’ढा, छो’रो पाउछस्, भने पछि, मेरी आमालाई रो’जे …. – Sudur Samaj
“मा’न्छेको व’ली च’ढा, छो’रो पाउछस्, भने पछि, मेरी आमालाई रो’जे ….
कञ्चनपुरमा भु”त भगाउने भन्दै एकल महिलाको ह”त्या गरेको आ”रोपमा ७ जनावि#रुद्ध मु”द्दा दायर भएको छ। गत विहीवारबाट ब”न्धक बनाइ विभिन्न या”तना दिएर महिलाको ह”त्या गरेको आ”रोपमा २ धामी सहित ७ जना वि”रुद्ध आइतबार जिल्ला प्र#हरी कार्यालय कञ्चनपुरका मु”द्धा दायर भएको हो।’**थप भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
रन्जुला नाताले जेठानी पर्ने कमला साउदको घरमा उपचारका लागि गएकी थिइन्। कमलाको घरमा धामी आएकाले चैत २७ गते उनी त्यहाँ पुगेकी थिइन्। त्यसपछि पुनः सोही घरमा गएकी रञ्जुलाको वैशाख १ गते २ बजे दिउँसाे मृ”त्यु भएको थियो। तर घ”टना लुकाउन धामीहरुले वैशाख ३ गतेसम्म फुकफाक गरिरहेका थिए। **थप भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
धामी#झाँक्रीको समूहले रञ्चुलालाई आ”गोमा त”ताएको फ”लामे र”डले हा”न्ने गरेको उनका आफन्तले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्र्तरगत दैनिक ज्यालादारीमा वडामा काम गर्दै आएकी रन्जुलाको मृ’त्यु वैशाख १ गत विहीवार नै भएको बताइएको छ। उनको शव परीक्षणका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ।
श”व कु”हिएकाले विज्ञबाट मात्रै परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै महाकाली प्रादेशिक अ#स्पतालले सेती प्रादेशिक अस्पताल कैलालीबाट विज्ञ माग गरेको छ। बेदकोट नगरपालिका–६ मुसेपानीकी ४३ वर्षीया एकल महिला रन्जुला साउदलाई कु”ट”पिट गरी ह”त्या गरेको भन्दै भीमदत्त नगरका धामी#झाँक्री धर्मानन्द भट्ट, नारायण भट्ट, कमला साउद, जानकी घटाल, गौरी साउद,
कुवेर साउद र चक्र साउदवि”रुद्ध कि”टानी जाहेरी दिइएको कञ्चनपुरका प्र”हरी प्रवक्ता चक्र बहादुर शाहले बताए। पीडित पक्षले कर्तव्य ज्या#न अन्र्तरगत धामीझाँ”क्रीसहित सात जनाका नामका किटानी जा”हेरी दिएको उनले बताए। पछिल्लो समय सामाजिक संजाल मा निकै नै धेरै ह”त्या हिंसा का समाचार हरु देख्न सकिन्छ। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेर्नुहोश !
ब्यारेकमा गो”लि लागि मृ”त्यु भएकी कोपिला को घरमा पु’ग्दा देखियो म’नै रु’वाउने (भिडियो)